लागूऔषध सहित दर्जनौं पक्राउ
काठमाडौ । लागूऔषधसहित देशका विभिन्न स्थानबाट दर्जनौं पक्राउ परेका छन् । उनीहरु लागुऔषध सेवन देखि ओसारपसारको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । उदयपुर,त्रियुगा
प्रधानमन्त्रीको नामको पाँच अरब कहाँ गयो ?
डा. डिला संग्रौला, सांसद/ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । पाँच अरव रकम छुट्टाइएको यस कार्यक्रमलाई हेर्दा यसको बजेट, सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बादर लखेट्ने, ढुंगा
मोटरसाइकल आगो लगाउने युवक पक्राउ
अछाम । मोटरसाइकलमा आगो लगाउने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । २२ साउनको साँझ पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ६ तोलीस्थित पार्किङ गरी राखेको लु.३४ प५६७४ नम्बरको मोटरसाइकलमा सोही ठाउँ बसने
अर्पाटमेन्टमा जुवाखाल, प्रहरीले छापा मार्दा २१ युवक पक्राउ
ललितपुर । डाउनटाउन अर्पाटमेन्टमा जुवाखाल भेटिएको छ । प्रहरीले उक्त अर्पाटमेन्टमा कौडा तथा जुवातास खेलिरहेकाहरुलाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका २३ धापाखेलस्थित अर्पान्टमेन्टमा जुवा खेलाउने रंजित महर्जनलाई पक्राउ गरेको
भारतले काश्मिरबारे लिएको निर्णय आन्तरिक मामला भन्दै पाकिस्तानलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । २३ साउनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पाकिस्तानले भय उत्पन्न गर्न प्रेरित गर्ने गतिविधि गर्न खोजेको
समाजवादीमा प्रवक्ताको खोजी, नारायण तिवारीको चर्चा
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालमा प्रवक्ताको खोजी भइरहेको छ । पार्टी एकीकरण भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रवक्ता नहुँदा पार्टीको आधिकारिक धारणा सहज तरिकाले बाहिर नपुगेपछि प्रवक्ताको खोजी भएको हो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक जीवनकै कडा निर्णय लिए । जम्मु काश्मिरलाई दिदै आएको विशेष स्वायत्त राज्यको दर्जालाई वैधानिक तरिकाले खारेज गरिदिए । सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै मोदीले लिएको निर्णय अघि
कुमारी बैंकका सहायक म्यानेजरको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु
डडेल्धुरा। ट्याक्टर दुर्घटनामा परी कुमारी बैंकका सहायक म्यानेजर समिर बिष्टको निधन भएको छ । २२ साउनमा डडेल्धुरा सदरमुकाममा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको हो। भागेश्वर गाउँपालिका–४ रतनी घर भइ
सेतो वस्त्रमा सुष्मालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका मोदी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रायः गेरु वस्त्रमा हुन्छन् । धार्मिक स्वभावका उनी अरु रङ्गको कपडा सायदै पहिरिन्छन् । २२ साउनमा उनी सेतो वस्त्रमा देखिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा विदेशमन्त्री रहेकी
सुष्मा स्वराजलाई राजदूत आचार्यले दिए श्रद्धाञ्जली
काठमाडौं । भारतकी पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । २२ साउनमा उनको पार्थिव शरीरलाई आचार्यले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् । राजदूत
विवाहपछि प्रीयंकाको कामभन्दा हल्ला बढी
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसको जोडी सधै चर्चामा आइरहन्छ । आफूभन्दा कान्छा निकसँग विवाह गरेकी प्रियंका भारतमा भन्दा अमेरिकामा बढी व्यस्त हुनथालेकी छिन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा तीन दिनदेखि तालाबन्दी
काठमाडौं । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले तीन दिनदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले गर्ने भर्ना शुल्कमा वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित विद्यार्थी